Bilingual Chirongwa | BLI Zvikoro zveMitauro muCanada
Dzidza mitauro miviri
Chirongwa cheBilingualDzidza Chirungu & French
Chirongwa cheBilingualFrench & English
BLI chirongwa chemitauro miviri inokupa iwe mukana wekudzidza, kuongorora uye kudzidzira zvese zvikamu zvekudzidza mutauro, uchivhara hunyanzvi hwese uina (kuverenga, kunyora, kutaura uye kuteerera), girama uye mutsara wemazwi ese wechiFrench neechiRungu. Chirongwa cheBilingual chine makirasi echiFrench mangwanani uye echirungu makirasi masikati. Iyi nzira ndeyekudyidzana uye inotarisana nemudzidzi uye makirasi acho ane simba uye anoita.
Zvishoma vhiki 1 (hapana yakakwana)
Iwe unotora maFrench Makirasi mangwanani (9 - 14:05) uye echirungu makirasi masikati (14:05 - 17:50). Ichi chirongwa chirongwa chakasimba kwazvo.
1 chidzidzo = 50 maminitsi
ChiFrench: Wakatanga kufambira mberi
Chirungu: Akaderera yepakati kuenda kumusoro
Vadzidzi vanotora kosi yacho vanofanirwa kunge vakakwirira kupfuura chiRungu chepakati. Kana mudzidzi akasangana nedanho rinodikanwa kuti apindirwe muchirongwa chemitauro miviri, ivo vanofanirwa kutora makirasi edu enguva dzose kusvika asvika padanho repakati.
Ndokumbira kuti utibvunze nezve rumwe ruzivo nezve mutengo wedu wekusimudzira.
9:00 - 5:50 AM
Zvidzidzo zve42 vhikiBilingual
Vandudza ruzivo rwako muChirungu neFrance hunyanzvi kuburikidza nekuvandudza kweprojekiti uye kudzidza-basa. Dzidzira kugona kwako kunyora, kukudziridza kugona kwako kuteerera, kunatsiridza kugona kwako kuverenga.
Kukurukurirana musangano FSL
Yakasarudzika Election ESL
Unyanzvi hwesimba ESL
General ESL & FSL ZvirongwaTsananguro yekirasi
Muchivako ichi chemakirasi vadzidzi vanozodzidza ese epfungwa girama epfungwa anodiwa kuti vavandudze kururamisa kwavo, kugona kwavo uye kugona kwavo muFrench. Ichi chikamu chinofambidzana apo vadzidzi vane mukana wekushandisa girama uye kudzidza nezvemitemo kubudikidza nekutsvaga, nekutungamirwa nemudzidzisi uye neimwe tsananguro yakajeka. Kumwe kusimbisa kunoiswa pakukwanisa kutaura uchishandisa iyo girama poindi, ndosaka kune mikana yakawanda kwazvo yekudzidzira nekuvandudza. Vadzidzi vanozokwanisa kudzidzira hunyanzvi hwemitauro mina (kuteerera, kutaura, kuverenga nekunyora) mune yakasangana mamiriro. Kirasi misoro dzakasiyana dzakasiyana dzakakodzera masosi kuburikidza neakasiyana matekinoroji ekudzidza ayo anokurudzira kutaurirana mune chaiko nyika nharaunda. Vadzidzi vanovandudza hunyanzvi hwavo hwemutauro vachishandisa bhuku rezvidzidzo pamwe nekutora chikamu mumabasa akasiyana siyana kuvabatsira kudzidza uye kufambira mberi.
Iyi kirasi yakagadzirirwa kukubatsira kukurumidza kuita yako yekudzidza apo ichikubvumira iwe mukana wekusarudza makosi akaenderana nezvako chaizvo zvaunoda uye zvaunoda. Nguva yega yega isu tinopa yakasarudzika nzira yakasarudzika yeFrench ine chaiyo yakatarwa kana yakakosha kutarisisa, seChirungu / French mumafirimu uye mimhanzi. Nekuti pane vanowanzove vashoma vadzidzi mukirasi ino, pane kutarisisa kwakatemwa kubva kumudzidzisi.
Montreal & Quebec Guta